↑ "The larynx of roaring and non-roaring cats" (1989). Journal of Anatomy 163: 117–121. PMID 2606766.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=နှင်းကျားသစ်&oldid=709259" မှ ရယူရန်
၁၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၅:၂၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၅:၂၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။